Umhlaba wemfashini, ubuhle, impilo kanye nobudlelwano 2022
Umhlaba wemfashini, ubuhle, impilo kanye nobudlelwano
U-Mark Zuckerberg ufisele wonke umuntu uNyaka Omusha WaseShayina Ojabulisayo: lokho ividiyo esifundisa kona
Isikhulu seFacebook uMark Zuckerberg ufake i-video ekhasini lakhe likaFacebook lapho ebefisela khona umhlaba wonke unyaka omuhle waseChina. Inqubo evamile isiphenduke umbono omangalisayo futhi ingaba usizo ngempela kubazali
UPavel Volya waqhumisa izinkundla zokuxhumana ngesimemezelo sothando ezinganeni zakhe nakumkakhe
Umethuli we-TV odumile nosomahlaya uPavel Volya, manje oseholidini e-Barcelona, ​​​​engxoxweni yakhe yakamuva, ukhulume ngokuthinta inhliziyo ukuthi kunjani ukuba ubaba wezingane ezimbili
INkosana uHarry yathola inkosazana yayo eGreece
Ngokusho kwabezindaba base-Australia, iNkosana uHarry ayikwazanga ukumelana nezintelezi ze-blonde eneminyaka engu-19 ubudala, inkosazana yamaGreki uMaria Olympia
U-Lilia Rebrik wabonisa ingaphakathi lefulethi lakhe
Umklamo omhlophe wengaphakathi lekamelo lokuphumula, ikhishi, igumbi lokugezela kanye nenkulisa, inkanyezi uLilia Rebrik wakhetha hhayi ngenhlanhla. Kuye, umhlophe uwuphawu lokuthula, ukuzwana nenjabulo
Tbilisi: izindawo ezinhle kakhulu edolobheni
"Intwasahlobo efudumele" - yile ndlela igama elithi Tbilisi lihunyushwa ngayo lisuka kwisiGeorgia. Futhi, ngempela, igama elithi "tbili" liyigama elifanele kakhulu elingachaza imikhuba kanye nemibala yaleli dolobha elinomoya wokungenisa izihambi laseGeorgia
UZlata Ognevich uzocula emkhiqizweni odumile we-ballet
U-Zlata Ognevich udlale i-ballet ye-blockbuster ethi The Great Gatsby
Indlela yokuphakamisa intambo ngendlela efanele futhi ungalimali
Ukuphakanyiswa kwentambo kwenziwa kanjani nokuthi kungani kungaba yingozi kakhulu ebusweni nasempilweni yakho: kungani ukuvuselelwa kwentambo kuyingozi
UVera Brezhneva wabhukuda namahlengethwa
Ekhasini lakhe le-Instagram, uVera Brezhneva ushicilele isithombe esihle namahlengethwa. Lo mculi uvumile ukuthi indodakazi yakhe endala uSonia nayo iyahlanya ngalezi zilwane ezincelisayo
UKim Kardashian ushicilele isithombe sokuqala sendodana kaSaint
Umlingisikazi uKim Kardashian wabelane nabalandeli ngesithombe sokuqala sendodana yakhe u-Saint West, owazalwa esikhathini esingaphansi kwezinyanga ezintathu ezedlule
Kungani udinga izimonyo nge-SPF futhi iyini i-SPF: amaqiniso athakazelisayo
Ihlobo yisikhathi sonyaka lapho udinga nje ukusebenzisa izimonyo ezinesici se-SPF. Iyini i-SPF futhi kungani isikhumba sakho siyidinga - funda kundaba yethu
I-manicure yemfashini nesitayela sasehlobo lika-2018
Imfashini nesitayela se-manicure ehlobo lika-2018: yimuphi umklamo wezipikili wehlobo lika-2018 ozobukeka uphelele ezipikili zanoma ibuphi ubude
Amafilimu angcono kunozakwabo bezincwadi
Ngokuvamile kuthiwa kungcono ukufunda incwadi kuqala, bese ubuka ifilimu. Kepha amanye amafilimu asibekela inguqulo yencwadi kangangokuthi uyamangala: kuvele ukuthi ithwetshulwe encwadini !?
Igagasi noma umcibisholo: ungayikhetha kanjani insimbi engcono kakhulu yokugoqa futhi wonge kufika ku-50%
Ingabe ufuna ukuthola amagagasi amahle ezinwele noma uqondise ama-curls? Ukunikezwa kwezitolo eziku-inthanethi zase-Ukraine, ezethulwe esizeni ek.ua, kuzokwanelisa ama-fashionistas adinga kakhulu
12 Izitshalo Ezilula Zezindlu Ezihlomulayo
Kulabo abangenaso isikhathi sokunakekela izitshalo zasendlini, kunezinketho ezinhle kakhulu zezimbali ezingathobeki, nazo eziletha izinzuzo
I-Coca-Cola ithuthukise futhi yasebenzisa inguqulo ebuyekeziwe yelebula yokudla
Ngamaholide asebusika, inkampani eyaziwa kakhulu ye-Coca-Cola ilungiselele isimanga kuwo wonke umuntu! Isiphuzo esiyintandokazi siphume sinelebula ebuyekeziwe
Indlela yokuhlanza ifulethi loNyaka Omusha futhi ungakhathali
Njalo ngonyaka ngoDisemba 31 … cha, awuyi endlini yokugezela nabangani bakho, kodwa ekuseni uqala ukuhlanza okujwayelekile kwekamelo ngalinye, okubonakala kungapheli, futhi ukhathele ukuze iholide lingabi injabulo
UWill Smith ulahlekelwe umuntu osondelene naye
Umndeni kaWill Smith unosizi: osondelene kakhulu nomlingisi, ubaba kaWillard uCarroll Smith, ushonile
Imfashini ye-Spring-summer 2016: izicathulo zokuphrinta inyoka, amathiphu e-stylist
Esikhathini semfashini sentwasahlobo-ehlobo lika-2016, abaklami bavame ukuphendukela ezitshalo nezilwane ukuze bathole ugqozi emaqoqweni abo. Namuhla into yesonto evela ku-stylist u-Kristina Yakimets - izicathulo zokuphrinta inyoka
UBrad Pitt ulashelwa ukuba umlutha wotshwala
Ngemva kokudivosa u-Angelina Jolie, uBrad Pitt welashelwa ukuluthwa utshwala ukuze avunyelwe ukubona izingane zakhe
URose Al-Namri ubonise isithombe esithinta inhliziyo nomyeni wakhe
Umhlanganyeli wesizini yesi-3 yombukiso othi "The Bachelor" uRosa Al-Namri uthathe isinqumo sokungaqhubeki nokudonsa uzungu mayelana nezinguquko empilweni yakhe yangasese, futhi ekugcineni wahlehlisa umyeni wakhe, ayeshade naye ekupheleni kukaJanuwari
Imaphi amaphutha esiwenza ekuqaleni kobudlelwano?
Amaphutha amakhulu abesifazane abawenzayo ekuqaleni kobudlelwano nendoda: Amaphutha ama-5 athandwayo ngamunye wethu awenza ekuqaleni kobudlelwano
Ungakhohlwa kanjani okwakho okwedlule: Amathiphu ama-5
Ungakhohlwa kanjani okwedlule? Kunezindlela eziningi zokuyeka okwedlule, i-psychology yokwamukela nokuthethelela izokusiza kulokhu. Thola izindlela ezingcono kakhulu zokukhohlwa okwedlule bese uqhubekela phambili
Ukuzivocavoca Kwentamo: Indlela Yokuqeda Ubuhlungu Bentamo
Ubuhlungu bentamo bujwayelekile kuwo wonke umuntu wanamuhla - umsebenzi wokuzivivinya, ukungawuvivinyi umzimba nokudla okungenamsoco kuzenza bazizwe. Indlela yokukhulula ukungezwani kwentamo - funda kundaba yethu
Ibhayisikili elingenasondo lasungulwa e-USA (ividiyo)
Sesike sakhuluma ngebhayisikili - i-treadmill. Okulandelayo emgqeni enye inguqulo emangalisayo yale yunithi eyaziwa kusukela ebuntwaneni, engasetshenziswa futhi njengesilingisi sezemidlalo
Izithombe ezithinta inhliziyo kakhulu zezimpungushe ezincane
Siyavuma: izithombe zama-chanterelles ziwubuthakathaka bethu. Futhi singathini ngezimpungushe ezincane
Kungani amadoda ekopela futhi yiziphi izimpawu zokukopela
Ingabe zikhona izimpawu zokukopela nendlela yokuqonda ukuthi indoda iyakukhohlisa? Akunzima kangako, cabanga nje uma ufuna ukwazi ngakho
Indlela yokudweba amaqanda ePhasika: imibono engu-12 emihle futhi engavamile
Ukwenza okuthile ngezandla zakho kuhlale kujabulisa, ikakhulukazi eholidini! Indlela yokudweba amaqanda ePhasika ngendlela yokuqala - bheka imibono Eyodwa enhle kakhulu
Iyiphi ingubo yokugubha uNyaka Omusha ka-2020: izingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka
Umbala oyinhloko ka-2020 uluhlaza okwesibhakabhaka, okusho ukuthi kufanele unake izingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka zephathi kaNcibijane. Sikunikeza izinketho ezimbalwa
Umhlahlandlela wezipho zoSuku luka-St. Nicholas kanye Nonyaka Omusha kusuka ku-LuckyLOOK
Ukukhetha izipho zabathandekayo kungaba nzima: emva kwakho konke, labo obathandayo bafuna ukunikeza umhlaba wonke! Kodwa uma usanciphisa isikali, khona-ke ngokuqinisekile kuyinto efudumele, ethokomele futhi eqotho. Lezi yizipho ozozithola kwa-LuckyLOOK
Ukukhanya okwengeziwe ekwindla eliguqubele: Izingcezu ezi-8 ezinhle kakhulu kuma-sequin asemfashinini
Izindwangu ezikhazimulayo, kungaba isiliva, igolide noma ama-sequin ayo yonke imibala yothingo, zibaluleke kakhulu ku-Fall-Winter 2016
Imisebenzi yezemidlalo iyisiqinisekiso sempilo enhle nomoya omuhle kakhulu. Ukwenza ukuzivocavoca kwakho kungabi usizo kuphela, kodwa futhi kujabulise, udinga ifomu lezemidlalo. Sizokutshela ukuthi ungakhetha kanjani into enhle kuphela, kodwa futhi nekhwalithi ephezulu
Yiziphi izingubo zemfashini ezizogcizelela kakhulu ezinqulwini ezikhangayo nezinqe
Isiketi sepensela siyisisekelo se-wardrobe eyisisekelo. Isiketi esifashini sika-2016 siyi-trapeze. I-booty enhle ibukeka kahle ngezingubo ze-bandau. Gcizelisa ama-hips ngebhulukwe elinokhalo oluphezulu
Imibala emi-5 eyinhloko yasekwindla nasebusika yango-2016
Imibala ethandwayo ekwindla 2016 - blue and fuchsia. Imibala ethrendayo 2016 - grey noble lilac
Abesifazane bakwamanye amazwe balahlekelwa kanjani isisindo: Izindlela ezi-5 ezidume kakhulu zokunciphisa umzimba ngaphandle kokudla ukudla
Uma kuziwa endleleni yokulahlekelwa isisindo ngaphandle kokudla ukudla, kunenombolo engapheli yokupheka - futhi ngayinye izosebenza ngendlela yayo. Saba nesithakazelo ukuthi iyiphi indlela yokulahlekelwa isisindo ekhethwa ngabameleli bamanye amazwe. Imininingwane - esihlokweni
Amadoda anemiluko: inkambiso entsha ingene ku-inthanethi
Ingabe i-pigtails iyisitayela sezinwele sowesifazane? Kuvele ukuthi akunjalo! Amadoda anesibindi athembisa ukufakazela ukuthi ngisho nabameleli bentshebe bobulili obunamandla bangakwazi ukuhambisana nama-braids angekho ngaphansi kwamantombazane. Uma kungengaphezu kuka & hellip;
Izindlela Eziphezulu Ezi-3 Ezilula Zokwenza Izinwele Zakho Zibe Zinhle Ngaphandle Kokuya Esalon
Ngokuphambene nenkolelo evamile, izinwele ezinhle ezicwebezelayo azihlali ziwumphumela wokuvakashelwa njalo kuma-salon wobuhle. Funda mayelana nendlela yokwenza izinwele zakho zibe nempilo ngaphandle kokuchitha imali esihlokweni sethu
10 izimfihlo makeup okusheshayo kulabo abasheshayo
Ngamunye wethu unezimo lapho udinga ngokuphuthumayo ukubaleka emhlanganweni futhi asikho isikhathi sokwenza izimonyo. Noma izimonyo zakho ozithandayo zaphela kungazelelwe, awukwazi ukugxumela esitolo, futhi awazi ukuthi uzishintsha kanjani
Uwakha Kanjani Izinqe Zakho: Izivivinyo ezi-5 ngemizuzu eyi-10 ngosuku
Izinqe ezinhle eziyindilinga azinakwenziwa ngokudla okukodwa, udinga ezemidlalo. Izindaba ezinhle ukuthi kukhona ukuzivocavoca okusebenzayo okuzothatha isikhathi esincane kakhulu
Omama abasebasha abangu-6 abafakazela ukuthi ukukhulelwa akusona isithiyo kulesi sibalo
Abantu abaningi bakhononda ngokuthi ngemva kokubeletha, lesi sibalo asisakwazi ukubuyela esimweni saso sangaphambili esasizacile. Kodwa hhayi bona. La mantombazane awakhonondi, kodwa angena emidlalweni
Indlela yokuziphatha ngesikhathi se-Saturn retrograde 2017
I-Saturn Retrograde 2017 yisikhathi esiyinselele kodwa esithakazelisayo. Indlela yokuziphatha ngalesi sikhathi, funda endabeni yethu
7 abesifazane abanonya kakhulu emlandweni womhlaba
Ngaso sonke isikhathi, isizotha nokuhlanzeka kwakubhekwa njengemfanelo eyinhloko yowesifazane. Kodwa kwakukhona abakhululekile okwathi, kukho konke ulaka lwabo, abazange baxoshe, kodwa baheha izixuku zamadoda kuphela
Mama, ngiyaphila: isihambi sithumelela unina izithombe ezithinta inhliziyo ezivela emazweni ahlukene
U-Jonathan Quinhoses wayeka umsebenzi wasehhovisi owodwa oyisicefe wahamba wayohamba emhlabeni. Unina wayekhathazeke kangangokuthi wacela ukubhala kaningi futhi abike: konke kuhamba kahle. Umhambi wasungula indlela yokuqala
Amamodeli ama-curvy ahlobise amakhava omagazini
Amamodeli we-Curvy aya ngokuya ethandwa futhi edingeka kakhulu. Yimuphi kubo osevele evele esembozweni somagazini wefashini - funda endabeni yethu
Intombazane yehle ngo-40 kilograms ngenxa yomkhuba owodwa nje
U-Alyssa wathandana futhi wathutha wayohlala nesoka lakhe. Kodwa umkhuba ovamile wokudla ukudla okusheshayo phambi kwe-TV wake wabonisa intombazane esikalini isibalo samakhilogremu angu-100
I-contouring yobuso: inkambiso edlulayo noma isidingo
Ukuze ugcizelele isithunzi sobuso futhi ufihle amaphutha, akudingekile ukufuna usizo lwabahlinzayo bepulasitiki. Ungenza ubuso obubanzi bube buncane, obuyindilinga - oblong usebenzisa indlela ekhethekile yokwenza izimonyo ebizwa ngokuthi "i-contouring
Ukufana okumangalisayo: intombazane eneminyaka engu-3 ubudala ikopisha ngethalente izithombe zabesifazane abadumile
Izinkomo zineminyaka engu-3 kuphela ubudala, kodwa zishintsha zibe abesifazane abadumile kangcono kunanoma yimuphi umuntu omdala
Indlela yokwenza ipasipoti ye-biometric yengane
Kusele izinsuku ezimbalwa ngaphambi kombuso we-visa-free ne-European Union. Indlela yokwenza ipasipoti ye-biometric yengane, yimiphi imibhalo edingekayo nokuthi ingakanani ipasipoti ye-biometric yengane - funda ezintweni zethu
Izibonelo ezikhuthazayo zomama bokufaneleka
Omama abancane bangaba bahle futhi be-sexy. Futhi amaqhawekazi ethu afakazela leli qiniso
Ungawasusa Kanjani Ama-Energy Vampires: 7 Strategic Solutions
Ama-vampire wamandla afana "nezimbobo ezimnyama". Zivele zingabonakali futhi zithatha wonke amandla okuphila kubantu abaseduze kwazo
U-Ekaterina Klimova wamangala ngomzimba wakhe ozacile eseholidini eduze nogu loLwandle Olufile
Umlingisikazi Ekaterina Klimova waya eholidini nezingane zakhe eJordani. Ku-Instagram yakhe, inkanyezi isivele ikwazile ukukhombisa wonke umuntu isibalo sayo esincane eduze nogu loLwandle Olufile
Izipho ezivela eChina zakho kanye nabathandekayo bakho: kanjani ukuletha izimpahla ezivela eChina?
Ukhisimusi omuhle: thola ukuthi kungani kufanele nakanjani ubukele lo mdlalo wamahlaya
Amafilimu okudla amangalisayo azokhuthaza
Izimpawu eziyi-10 zokuthi ungemuva kwezikhathi, kepha zingalungiswa